how to use word excel, learn to use word and excel, what is internet, how to use internet, about ip address, learn about internet, about computer, few information about computer, computer knowledge, waht is computer, child education in Nepal, educate your children online,, An online link of nepali portals, nepali food recipe, how to prepare momo, how to prepare dal bhat, how prepare nepali food, newari food, list of nepali food recipe, useful links of nepal, map of nepal, airlines list, nepali calendar, slc result, STD ISD codes, insurance companies, EDV Result, nepal banks, univercities, finance, remittance, hotels, travel , trekking and many more
How to Create and save file in Microsoft Word
कम्प्युटरमा टाईप गरी वा केहि लेखी कसरी जोगाएर राख्ने
Click Start Button - on the left corner of your Desktop
Click MS Word
Click to File or save button on the top left corner
Give name and save the document
Open it and edit it whenever you like.
तपाईंले कम्प्युटर खोल्ने ( on ) गर्ने बित्तिकै देखिने स्क्रीनलाई Desktop भनिन्छ । तपाईंले स्क्रीनमा Microsoft Word प्रोग्राम को Icon पनि देख्न सक्नु हुन्छ । यदि डेस्कटपमा देख्नु भएन भने Desktop को देब्रे पट्टीको कुनामा Start लेखेको button देख्न सक्नु हुन्छ । आफ्नो कम्प्युटर को बाँया पट्टिको तल्लो कुनमा हेर्नुस् त ! त्यसमा माउसको चुचो लागेर रख्नुहोस् अनि माउसको बाँया पट्टीको button मा चोरी औंलाले थिच्नुस् । प्रोग्रामहरूको लामो लिस्ट देखापर्छ । त्यहाँ लिस्टमा Microsoft Word को Icon (चिन्ह) देख्न सक्नु हुन्छ , यसलाई दुई पलट क्लिक गर्नुस् । वा तपाईंको माउसको देब्रे पट्टी थिचे पछी एउटा बक्स निस्किन्छ । यस बाकसमा Open भन्ने बटन थिच्नुहोस् र Word प्रोग्राम खोल्नुहोस् । अथवा त्यो Microsoft Office लेखेको फोल्डर भित्र पनि हुन सक्छ । त्यस्मा थिच्नुस् । त्यहाँ लिस्टमा Microsoft Word को Icon (चिन्ह) देख्न सक्नु हुन्छ यसलाई दुई पलट क्लिक गर्नुस् ।
"मुसे-चुचो लाई माउस कर्सर (mouse cursor) भनिन्छ ।"
Figure 1: Position of start and MS Word
तपाईंको कम्प्युटरको स्क्रीनमा एउटा नयाँ खाली सेतो पन्ना देखा परयो होला । अब तपाईं यहि पन्नामा लेख्न सक्नु हुन्छ । अब यहाँ तपाईं ले चाहनु भएको मान्छे लाई सम्बोधन गर्दै चिट्ठी लेख्न सक्नु हुन्छ ।
Figure 2: How to save word document
यहाँ हामिले सम्झनु पर्ने कुरा चाँही त्यो पत्रलाई आफ्नो कम्प्युटरमा जोगएर राख्नु हो । त्यसलाई हामी कम्प्युटर भाषामा save गर्ने भन्छौं । अब यो चिट्ठीलाई save गर्न पन्नाको देब्रे पट्टी माथि Toolbox (केही सहयोगी औजारहरू) हुन्छन् । एक पटक तपाईंले खोल्नु भाको word पन्ना को माथि हेर्नुस् त । त्यहा थुप्रै icon (चित्र सहितका औजारहरू) छन् । त्यस Tool बक्समा फाइल लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोस् ।
Figure 3: How to save file in computer
अब त्यहाँ एउटा बक्सा देखिन्छ । त्यही बक्सामा एउटा save files भन्नी देखा पर्छ । त्यसलाई थिच्नुहोस् । (यहाँ थिच्नुहोसको मतलब माउसमा थिच्नुस् हो । ) यसो गरे पछी फेरि अर्को बक्स देखा पर्छ यो बक्स ले तपाईं लाई यो चिट्ठी कता save गर्ने भनेर सोधेको हो । अब तपाईं त्यस बक्सा को देब्रे पट्टी देखिएको लिस्टमा गएर Desktop वा कुनै ठाउँको नाम थिच्नुहोस् अनि त्यो बक्सा को तल खाली ठाउँमा आफुलाई राख्न मन लागेको नाम राख्नुस् । अनि save लेखेको बटनमा थिचनुस् फाइल save हुन्छ । फाइल लाई कुनै नाम दिनुहोस्, मैले यहाँ Letter भन्नी नाम दिएकोछु ।
तपाईं को फाइल save भयो । अब तपाईं लाई चहिएको बेला निकालेर काम गर्नु होस्।
फाइल निकाल्न वा खोल्नको नीम्ति अघि जस्तै desktop मा जानुहोस् अनि letter भन्ने फाइल दुइपल्ट क्लिक गर्नुहोस् । फाइल खुल्छ । तपाईं आफ्नो पत्रलाई अबश्यकता अनुसार सम्पादन गर्दै save (जोगौनु ) गर्न सक्नु हुन्छ �